ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်း - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO ။ , LTD
Ouzhan တိကျသောဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်း - တရုတ်စျေးပေါသောအတုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူ
အလွန်ကောင်းမွန်သော terminal စက်စက်ရုံတစ်ခုအနေဖြင့် OuZhan သည်ထုတ်လုပ်သူများအားအတတ်ပညာမြင့်မားစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်အရင်းအမြစ်များစွာရှိသည်။ အများအားဖြင့်အတုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုအပူချိန်မြင့်မြင့်တွင်တွေ့ရှိရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးစက်ရုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့ပို့သည်။ ထို့ကြောင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံရှိသောအစွမ်းထက်သောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးမြောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ရုံသာမကထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မြစ်အောက်ပိုင်းစက်ရုံများ၏နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းကောင်းစွာနားလည်ထားပါသည်။ , အအတုအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူ။
၀ န်ဆောင်မှုအတုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါသင်ကအတုလုပ်သည့်စက်ရုံကိုသင်တိုက်ရိုက်ရှာဖွေနိုင်သည်၊ သို့သော်ပိုကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ရုံအဆင့်ရှိစက်ရုံတစ်ရုံကိုရှာရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်ပုံဆွဲခြင်းကိုသာသူတို့ထံပေးပို့ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်လုပ်စက်ရုံများကိုရှာဖွေရန်၊ သင့်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစီစဉ်ရန်သူတို့၏နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သငျသညျလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်ဟုတစ် ဦး အတုစက်ရုံနှင့်ထို့နောက်စက်ရုံစက်ရုံ, ရှာမည့်အစားအချောထုတ်ကုန်၏ပို့ဆောင်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခြေအနေများမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်ပြီးမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းသည် Ouzhan ၏အရေးအကြီးဆုံးသောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်အတုများနှင့်သိပ်မရင်းနှီးသောကြောင့်သူတို့၏ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုများကိုရရှိသောအခါဒီဇိုင်းများသည်အတုနှင့်မကိုက်ညီကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အတုနည်းပညာဖြင့်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သည်။ အခြားသင့်လျော်သောအခြေအနေတစ်ခုမှာဖောက်သည်များသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဆွဲရန် CAD ကို သုံး၍ မရဘဲ၊ လက်မခံဘဲသည်းခံစရာမလိုဘဲ၊ အဓိကရှုထောင့်အချို့သာဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထွေထွေအတုပြုလုပ်သောသည်းခံမှုအမှတ်အသားများနှင့်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာပုံဆွဲမှုများကိုလည်းပေးလိမ့်မည်။
•မှိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောဖောက်ခြင်းမှတစ်စုံသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်ရှားသောကောင်းကျိုးများအနက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာနှင့်သေတ္တာဆိုင်ရှိသည်။
•ပိတ်ထားသေဆုံးအတု။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကုမ္ပဏီ၏အတုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်တံခါးပိတ်ဖေါက်ခြင်းဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစားသံမဏိပြားများနှင့်လူမီနီယံဖောင့်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားကြသည်။ တန်ချိန် ၃၀၀ မှ ၂၅၀၀ တန်အတုများကို အသုံးပြု၍ ၀.၂ ကီလိုဂရမ်မှ ၅၀ ကီလိုဂရမ်ခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။
•တိကျသောအပြီးသတ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမှားများသည်နောက်ဆုံးအပိုင်း၏နောက်ဆုံးအတိုင်းအတာသို့မဟုတ်သည်းခံမှုကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်လုပ်သည့်အခါအချို့သောသည်းခံမှုများကိုကြိုတင်ယူထားပြီးလျှင်တိကျစွာစက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဤသို့သောလုပ်ငန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားပိုမိုတိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပေးလိမ့်မည်။
•အပူနှင့်မျက်နှာပြင်ကုသမှု။ ထုတ်ကုန်၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာမာကြောခြင်းကဲ့သို့သောအပူပေးမှုကိုပြုလုပ်ပြီးနောက်ဖောက်လုပ်ခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သည့်အပူကုသမှုဝန်ဆောင်မှုကိုမဆိုတောင်းခံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပန်းချီ၊
•ထုံးစံထုပ်ပိုးဝန်ဆောင်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးထားသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုလိုအပ်သောထုပ်ပိုးမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုသာပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Ouzhan Forging န်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပါ
Ouzhan သည် CNC စက်တွင်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအထူးပြုခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတုလုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းသောအနေအထားတွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့အတုလုပ်ရာတွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသည်။
၂။ CNC ထုတ်လုပ်နိုင်သောစွမ်းရည်မျိုးစုံ
Ouzhan သည်အလှည့်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ lathing၊ တူးဖော်ခြင်း၊ CNC အလှည့်နှင့်ကြိတ်ခွဲခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုအထူးပြုထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်တိကျမှန်ကန်သောစက်အစိတ်အပိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဖွဲ့မှရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနတွင်အင်ဂျင်နီယာ ၁၀ ဦး ရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်တရုတ်ပြည်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှဆရာဝန်များသို့မဟုတ်ပါမောက္ခများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်ဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းနှင့်စက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ပါသည်။
4. တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (ISO 9001: 2008)
သင်၏အရည်အသွေးပြည့် ၀ သောစစ်ဆေးရေးဝန်ထမ်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများအရစမ်းသပ်ရန်နှင့်ဖောက်သည်များ၏အတုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်သည်။
5. OEM & ODM လက်ခံနိုင်ဖွယ်
စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏တီထွင်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုသင်၏ 2D သို့မဟုတ် 3D ပုံဆွဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အားမျှဝေရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ဘဝကိုပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြပါစို့။
Forging ၀ န်ဆောင်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း
အတုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်သတ္တုများကိုဖိအားပေးခြင်း၊ ဖိခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ဖိအားများဟုခေါ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖွဲ့စည်းရန်ဖိအားပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ကာဗွန်၊ သတ္တုစပ်များနှင့်သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်၊ တိုက်တေနီယမ်၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးနီစသည်တို့အပါအ ၀ င်မည်သည့်သတ္တုများကိုမဆိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သတ္တုကိုဖောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မတိုင်မီအပူပေးပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောအမျိုးမျိုးသောဖောက်လုပ်ခြင်းများတွင်အအေးမိခြင်း (သို့) ခေါင်းပုံခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း (အသေခံခြင်း)၊ ပွင့်လင်းသောဖောင့်နှင့်အတုံးအတုံးများတပ်ဆင်ခြင်းများပါဝင်သည်။ ရွေးချယ်ထားသောဖောက်လုပ်ခြင်းအမျိုးအစားသည်အတုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောသတ္တုနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏ပုံသဏ္,ာန်၊ အရွယ်အစားနှင့်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အအေးခံခြင်းတွင်သတ္တုကိုတိုက်ရိုက်အပူမပေးပါ။ ၎င်းအစားအလွန်အမင်းဖိအားများအောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစားကိုနောက်ဆုံးပုံစံသို့တိကျစေသည်။ ဒါဟာမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောစွဲစေအဖြစ်သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည်။ သတ္တုပုံသွင်းရန်လိုအပ်သည့်အင်အားသည်အလွန်ကြီးမားသော်လည်းအပူမလိုအပ်သောကြောင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြု၍ အရာဝတ္ထုများကိုဖောက်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သည်အလွန်သေးငယ်သည်။ ဤနည်းဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသောဆောင်းပါးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အားကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပူသည်သတ္တု၏စွမ်းအားနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုအားနည်းစေသည်။
Impression die forging သည်အသုံးအများဆုံးလုပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သေဆုံးသောကာလတွင်သေသောအရာနှစ်ခုကြားတွင်သတ္တုထည်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ထားသည်။ မှိုချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်း၏တိုးချဲ့ထားသောအရံသည်မှို၏ဘေးနံရံကိုထိသည်အထိပုံသဏ္plasticာန်သည်ပလပ်စတစ်ပုံသဏ္formationာန်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ workpiece မှအရည်တစ်ချို့သည်မှုတ်သည့်အပြင်ဘက်သို့စီးသောကြောင့် Flash ကိုဖွဲ့စည်းသည်။ Flash သည်အေးသွားသောအခါ workpiece အားပုံပျက်သောအားခုခံနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏စွမ်းအားကိုတိုးစေသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပွင့်လင်းသေသော့ဖောက်လုပ်ခြင်း၌, အသေလုံးဝ workpiece ဖုံးလွှမ်းမထားဘူး။ အဲဒီအစား, အပိုပစ္စည်း၏ရှုထောင့်အားလုံးတိုက်ရိုက်ပူမှိုအဆက်အသွယ်ကနေအေးပွင့်လင်းallowရိယာများသို့ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုအချို့သောပွင့်လင်းအာကာသရှိပါတယ်။ ပွင့်လင်းသေသော့ခတ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း, သတ္တုအရာသည်၎င်း၏ recrystallization အပူချိန်အထက်အပူ, ပြီးတော့စက်ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံး, အပိုပစ္စည်း၏ရှုထောင့်အတုနိုင်အောင် workpiece ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ အဆိုပါ workpiece ရွေ့လျားခြင်းနှင့် repositions နှင့်အမျှပွင့်လင်းareaရိယာထဲမှာအစိတ်အပိုင်းများသတ္တု recrystallization အချက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအအေး, ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဆက်လက်အဖြစ်ပြန်လည်အပူပေးလိမ့်မည်။
သံမဏိလှိမ့်ခြင်းသည်သတ္တုတောင့်များကိုအပူပေးသည့်အပူသို့အပူပေးသည်။ ထို့နောက် preform ကိုအတွင်းဘက်သို့လှိမ့်သောကြိတ်ခွဲစက်တစ်ခုတွင်ထားရှိသည်။ ဖိအားသည်ပြက္ခဒိန်၏နံရံများကိုသက်ရောက်သောအခါ၊ preform သည် cylindrical သို့မဟုတ် annular ပုံစံကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပအတိုင်းအတာများကဤဖောက်လုပ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်တိုးချဲ့လာသည်နှင့်အမျှ၊ crossရိယာအကျယ်အ ၀ န်းလျော့ကျလာသည်။
အတုပစ္စည်းများ - ဖောက်လုပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများ
ကြွပ်ဆတ်သောပစ္စည်းများသည်အတုလုပ်ရန်မသင့်တော်ပါ။ ပိုကောင်းသောပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပိုကြီးသည့်ပလပ်စတစ်ဇုန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိနှင့်ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်နှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်များကဲ့သို့သောသံမဏိသတ္တုများကဲ့သို့သောဖောက်လုပ်ခြင်းအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။
Optical devices များ
မိုးလေ ၀ သ
အဆို့ရှင် & ပိုက်
Ouzhan Forging Surface အပြီးသတ်
အစိတ်အပိုင်းများ၏အသွင်အပြင်၊ မျက်နှာပြင်ချောချောမွေ့မွေ့၊ ချေးမှုနှင့်အခြားလက္ခဏာများကိုတိုးတက်စေရန်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော CNC လှည့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်သင်ရွေးချယ်သောသတ္တုမျက်နှာပြင်အပြီးသတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
((စံ) စက်အဖြစ်: ~ 125 RA μin (3.2 RA μm) ။ အသေးစား tool အမှတ်အသားများကိုအစိတ်အပိုင်းအပေါ်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
②ချောချောမွေ့မွေ့ - အနိမ့်အမြင့်နှုန်းမှာ ၆၂.၅ RA μin (၁.၆ RA မီလီမီတာ) ရရှိရန်အပိုပစ္စည်းများကိုအနိမ့်အမြင့်နှုန်းဖြင့်လုပ်ထားတယ်။ တောင်းဆိုချက်အရမျက်နှာကြမ်းကို ~ 32 RA μin (0.8RAµm) အထိလျော့ချနိုင်သည်။
③ Bead Blasted: Bead blasting သည်ပလတ်စတစ်ပေါက်ကွဲခြင်းကို tool ၏အမှတ်အသားအားလုံးဖယ်ရှားပြီးစက်၏အစိတ်အပိုင်းတွင်တစ်သမတ်တည်းဖြစ်စေ၊ အဓိကအားဖြင့်ဗေဒရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
④ Anodized Clear သို့မဟုတ် Colour: Anodizing သည်အလူမီနီယံအစိတ်အပိုင်းများ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပါးလွှာ။ မာကျောသော non-conductive ကြွေထည်များကိုထပ်မံဖြည့်တင်းသည်။ အရောင်အမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
od Anodized Hardcoat: Hardcoat သုတ်ဆေးသည်ပိုကောင်းသည့်ချေးခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ကြွေပြားများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ applications များအဘို့။
⑥အမှုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမှုန့်သည်အမှုန့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ခိုင်ခံ့။ ၀ တ်ဆင်မှုနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုကာကွယ်သည့်ပေါ်လီမာဆေးသုတ်လွှာလေးတစ်ခုထပ်ထည့်သည်။ အရောင်များစွာကိုရရှိနိုင်သည်။
ropol Electropolished: Electropolishing သည်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုအရောင်တင်ရန်၊ ဒါဟာမျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းစွာလျှော့ချရန်အသုံးဝင်သည်။
ox အနက်ရောင်အောက်ဆိုဒ် - အနက်ရောင်အောက်ဆိုဒ်သည်အသွင်ပြောင်းခံနိုင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်စေရန်နှင့်အလင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲသည့်အဖုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
rom Chromate ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်ယံလွှာ (Alodine / Chemfilm): Chromate ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်သတ္တုစပ်သတ္တုစပ်များ၏သံချေးတက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
⑩ Brushing: Brushing ကိုသတ္တုကြွေထည်ဖြင့်ကြွေထည်ဖြင့်အရောင် တင်၍ ထုတ်လုပ်သည်။